Home News Maxamed C. Waare oo god madow oo siyaasadeed geliyay DG HirShabeelle (Warbixin)
Maxamed C. Waare oo god madow oo siyaasadeed geliyay DG HirShabeelle (Warbixin)
Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta dib uga laabtay heshiis ay si wadajir ah u wada galaan hogaanka Dowlad Goboleedyada kaasoo lagu hakiyay xiriirka ay Dowlad Goboleedyada la leeyihiin dowladda Federaalka kaddib shir afar maalmood uga socday magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha DG HirShabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si rasmi ah warbaahinta uga shaaciyey in dowlad gobolleedkiisa iyo dowlada Federal-ka ah ay soo afjareen mad madowgii u dhexeeyey, oo ay hadda heshiis buuxa iyo wada shaqeyn isku afgarteen.
Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu qanciyay in lasiin doono bil walba lacag joogta ah oo dhan $500.000 lacagtaas oo ay bixin doonto safaaradda Qatar ay ku leedahay magaalada Muqdisho. Waxaa kale oo uu ballan qaaday Hoggaamiyaha DG Hirshabelle in uu heshiis buuxa la saxiixan doono dowladda Qatar heshiiskaas oo lagu wareejin doono dekedda Ceel Macaan dowladda Qatar.
Laba bilood ka hor mar uu booqasho ugu tagay carruurtiisa ayaa sidoo kale waxaa uu Maxamed Cabdi Waare ka ballan qaaday dowladda Imaaraadka iyo shirkadda DP World in uu ku wareejin doono dekedda Ceel Macaan, waxaana uu Imaaraadka ka soo qaatay lacag dhan $300.000 oo doollar. Safarkaan oo uu damcay in uu ka qariyo MW famraajo ayaa gadaal ka ogaaday ka dibna waxa uu qiraty in uu safarkaa ku tagay Imaaraadka lacagta ka soo qaatay.
Lama oga go’aanka ay dowladda Imaaraadka ka qaadan doonto Maxamed Cabdi Waare oo hanti iyo guryo ku leh dalka Imaaraadka, caruurtiisana ay ku nool yihiin halkaas. Waxaanse shaki ku jirin in dhibaato horleh u horseeday dadka iyo deegaanka Hirshabelle oo ilaa hadda ka badbaaday isqab-qabsiga siyaasada Somaliya iyo wadamada Khaliijka.
Waxaa sidoo kale warmurtiyeed aay soo saareen Golaha Iskaashiga Maamul Goboleedyada ayaa jawaab deg deg ah ka bixiyey go’aankii uu Maanta qaatay Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare kaasoo la heshiiyey dowladda Dhexe.
Maamul Goboleedyada ayaa sheegay inaysan waxba ka khuseyn go’ankii uu qaatay Waare isla markaasna aysan waxba u dhimi karin jiritaanka Iskaashigaan. Waxay sheegeyn inuu Waare u madax banaan yahay go’aan ka gaaridda mustaqbalka Maamulkiisa iyo dowladnimada Soomaaliya.
MW Waare ayaa lagu yaqanaa in uu balan fur ku sameeyo cidkastaa oo wax ku darsato ama wax kala dhaxeeyaan. Dowlada Fedaraalka oo aad u ogsoon balan la’aanta MW Waare ayaana keentay in maanta RW Kheyre iyo Wasiiradda Xukumadiisaba ay diidaan in MW Waare ay si wadajir ah ula qabtaan shir jara’id. Xildhibaan Cabdishakur Cali Mire oo ka mida Xildhibaanada Taageersan RW Kheyre ayaa ku goodiyay in dowlada marnaba si buuxda u aamini doonin MW Waare, Xildhibaanka ayaa yiri “ dhibka uu gaarsiiyay dowlada waa mid aan in mudo ah laga soo kabsandoonin, waxaana hubaan in mar laga aar goony doono ficilkii uu geeysay”
Previous articleShirkii Xildhibaanada beesha Daarood iyo MW Farmaajo maxaa ka soo baxay?
Next articleMaamulka Soomaaliland oo ka Hadlay Safarka Gaas ee Sanaag iyo Xiisad Cusub oo Curatay!!
Safia Jama: Why we need more Black voices in the third...
Somalia : Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell on the...